Spotify dia miasa amina mpandahateny iray hifaninana amin'ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Ny fanombohana ny HomePod dia mety ho ny fikasihan'ny Spotify tsy nanapa-kevitra indray mandeha mandefasa mpandahateny iray hahafahanao mankafy ny serivisy fandefasana mozika anao. Raha ny marina, tamin'ny fiandohan'ny taona lasa, Spotify dia nandefa asa fandefasana asa iray manasongadina ny fahalianan'ny orinasa amin'ny famolavolana vokatra hardware.
Nefa toa mazava izao, ny orinasa soedoà nanitatra ny isan'ny asa mitady ny fanamboarana vokatra enti-miasa sasany ianao, satria ankoatry ny talen'ny fampandehanana dia mitady talen'ny vokatra zokiny sy mpitantana vokatra ianao.
Tsy dia mahagaga ny hetsiky ny Spotify, raha ny marina, araka ny filazan'ny tsindry sasany, efa ela no tao ambadik'io hevitra io, saingy toa ny antony nananganana ny HomePod, miaraka amin'ny Google Home Max no antony lehibe antony lehibe handrisihana ny fivoaran'ity mpandahateny ity, mpandahateny iray izay mety mahafeno ny filan'ny mpampiasa maro rehefa mankafy ny mozika ankafiziny izy ireo. Inona koa, tsy voafetra amin'ny sehatra rehetra, mety hahomby kokoa noho ny HomePod izany.
Eny, tsy maintsy manana fiasa izay afaka mandrisika ny mpampiasa hividy ity mpandahateny ho avy ity, satria ny vahaolana natolotry ny Sonos sy ireo mpandahateny hafa miaraka amin'ny Spotify tafiditra dia tena tsara, raha tsy hoe mikasa ny hijanona tsy hamela ny fampiasana ny serivisy amin'ny alàlan'ity karazana fitaovana ity ny orinasa soedoà, zavatra iray izay efa nitranga vao haingana taorian'ny fanavaozana ny API-nao. Ho fanampin'izay, tsy maintsy nanolotra kalitaon'ny feo mitovy na avo kokoa noho izay natolotry ny HomePod sy ny Sonos, loharanom-baovao lehibe eny an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Spotify dia miasa amin'ny mpandahateny iray hifaninana amin'ny HomePod